Hellmann nke Real Squeezy Mayonezi 750g (Iceland) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Hellmann's Real Squeezy Mayonnaise 750g (Iceland)– Ordrs
Helmann nke Real Squeezy Mayonnaise 750g (Iceland)
Realmann nke Real Mayonnaise
N'ime afọ 100 gara aga Richard Hellmann kere Hellmann na ndagwurugwu na New York. O gosipụtara akara ngwaahịa ya kachasị mma site na ịkekọta eriri na-acha anụnụ anụnụ gburugburu ha. A ka hụrụ rịbọn a na-acha anụnụ anụnụ na akara ahụ ma gosipụta ntinye aka anyị na-aga n'ihu na ngwaahịa dị oke mma.
Anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji hụ na ndị ọrụ ugbo na-enye mmanụ anyị raara onwe ha nye usoro ọrụ ugbo dị mkpa nke na-echekwa ma chebe ala ha maka ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu.
Taa Hellmann na-aga n'ihu site na iji ihe ndị dị mma dịka akwa, mmanụ na mmanya. A na-ewepụta ihe niile anyị na-eme ka anyị na-eche maka mayonnaise nke Hellmann gụnyere ezigbo Real, Light and Mkpa ọkụ karịa ngwaahịa ndị dị na ite dị iche iche na karama mpempe akwụkwọ iji tinye otu mmụọ nsọ nke mmụọ nsọ na ezinụlọ nke nha niile. Anyị ebidolarị nri BBQ dị oke ọnụ gụnyere Smokey American, Spicy Brazil, na Mexico Chipotle, iji mee ka barbecues na-esi nri gafee UK. Site na mọstad odo odo ọhụrụ nke America, anyị nwere ike ịnye pọtụfoliyo uwe niile!
Gini na anaghi anwa ketchup anyi anyi na 36% karia tomato? A na-eji otu tomato dum, nke na-acha uhie uhie na nke na-acha akwụkwọ ndụ, eme nke ọzọ, ọ bụ mmanụ a honeyụ na-atọ ụtọ nke ọzọ.
Kpoo ude uto di egwu nke Hellmann nke Real Mayonnaise nke eji akwa 100% adighi
Hell Mayonnaise bụ akwa dị mma maka sandwiches, salads na burgers, ị nwekwara ike iji Hellmann dị ka ihe mgbakwunye iji gbanwee nri ị na-amị na nri abalị kwa nri dị ụtọ.
Na Hellmann nke anyi no na nri, anyi raara onwe anyi nye iji ihe kachasi nma maka ezigbo uto
Ezigbo Mayonezi anyị bụ ezigbo ezigbo okike Omega 3
Dị nnọọ ka anyị tinyere aka na uto dị egwu, anyị gbalịsiri ike ịmịpụta mmanụ anyị
Adabara ndị anaghị eri anụ
Ngwugwu nha: 430ml